Fambolena kôkômbra any an-tany malalaka | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fambolena kôkômbra any an-tany malalaka
Ny kôkômbra: ny fomba tsara hivoatra
Na ilay mpamboly za-draharaha matihanina aza, izay nanamboatra karazan-tany samihafa nandritra ny herintaona mahery, dia tsy afaka ny tsy handao ny efitrano roa miaraka amin'ny cucumbers. Efa lasa fomban-drazana izany - amin'ny lohataona no ahafahantsika maniry io vokatra io, manangona ny voankazo, manondraka azy any amin'ny banky, ary amin'ny ririnina dia mihinana sakafo entina hisakafo isika. Ny olona sasany dia mieritreritra fa ilaina ny mamolavola legioma amin'ny tany malalaka, toy ny hoe amin'ny endriny voalohany, ary io no hany fomba ahafahana mamokatra fambolena tena mahasoa sy mahasalama.
Ny momba ny famokarana kôkômbra aorian'ny fambolena an-tanety, toy ny manangona zavamaniry
Ny kôkômbra no iray amin'ireo legioma tena ilain'ny ankamaroan'ny voankazo. Sangisangy marihitra sy pikentika - ny sakafom-panafody voalohany eo amin'ny tabilao. Mba hambolena kôkômbra, tokony hanandrana sy hanome ny fambolena ireo singa ilaina rehetra ianao mba hahazoana vokatra tsara. Hevi-pitenenana: ny fitsipika fototra amin'ny famokarana cucumbers Ny cucumber dia heverina ho karazam-borona maoderina indrindra.
Rehefa mamboly kôkômbra any an-tany malalaka, ny mpikarakara saha
Ny kôkômbra dia nanamboatra ny habetsaky ny fahavaratra. Na izany aza, tsy ny rehetra no mahafantatra hoe rahoviana ary ahoana no hambolena azy tsara mba hahazoana vokatra tsara indrindra. Ary ny kôkômbra dia legioma mahatalanjona izay mametraka fepetra maromaro momba ny famafazana sy fikarakarana. Amin'ny fotoam-pambolena tsara indrindra sy ny fifantohan-tsakafo, ny zavamaniry dia afaka mitombo sy mitondra vokatra tsara na any amina trano fisotroana na eny an-kalamanjana.
Sakafom-bozaka eo an-tsaha
Ny famolavolana kôkômbia eo amin'ny sehatra misokatra dia zava-dehibe ny hanaraka ny fepetra rehetra mifehy ity dingana ity ary hiantohana fitsaboana sahaza. Ny tena manan-danja dia ny fahamarinana ara-dalàna. Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaritra ny fomba famokarana kôkômbra eny an-kianja malalaka isika mba hahazoana vokatra be dia be. Toe-javatra ho an'ny kôkômbika mitombo Alohan'ny hanombohanao haniry ny vokatra dia zava-dehibe ny mahafantatra tsara ny fepetra ilaina amin'ny fivoarana ara-dalàna ny legioma.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fambolena kôkômbra any an-tany malalaka